अब यो निधारमा कसले टिका लगाइदेला’-बहिनि हार्दिक श्रद्धाञ्जी – Life Nepali
अब यो निधारमा कसले टिका लगाइदेला’-बहिनि हार्दिक श्रद्धाञ्जी
धुलिखेल। आइतबार अमेरिकामा अन्य दिनको तुलनामा अलिक लामो ड्यु’टी गर्ने गर्छु । बहिनी जुनीमायाले नेपालबाट म्यासेन्जरमा म्यासेज पठाइन । म काममा छु । पछि कुरा गर्छु है भनेर अफलाइन’ बसे । यहि हो बहिनीसँग’ मेरा अन्तिम’ संवाद । कामबाट रुममा फर्किए । लामो, समय ड्युटीमा बसेको, भएर होला । धेरै निन्दाएछु । सपना पनि, नराम्रो, देखेँ । नेपालमा फोन गरे, फोन लागेन । रातभर काममा । मनमा अनेक कुरा, खेल्न, थाल्यो ।अमेरिको बिहान ६ः३५ बजे कोरियाबाट काका, नरेन्द्र गोलेको’ फोन आयो ।
काकाले रु’दैँ घरतिरको’ खबर थाहा भो भनेर’ सोध्नु’ भयो । काकाको’ मुखबाट सुनेको’ खबरले हात चलेन । शरीर’ थर थर काप्न थाल्यो । बोली बिस्तारै हराउन थाल्यो, । न त मैले आकाश देखे । न त धर्तीमा नै टेकेको अनुभव गरे । त्यो खबर मैले काम गर्ने म्यानेजर नारायण कुमार श्रेष्ठलाई सुनाए । नेपालमा भएका साथी प्रकाश सुन्दास, र अस्पतालमा रहेका पेमा लामालाई फोन गरे । कोठामा आएर सबैलाई फोन गरे । रुनु र छट्पटीनु बाहेक मेरो विकल्प, थिएन ।बहिनी, माइती गाउँमा काका बुबा रहर लामा गोलेको छोरी सुनिलाको, बिहेमा सहभागि हुन आएकी थिइन ।
त्यसै क्रममा शरीरमा ज्वरो आएको रहेछ । घरमा अहिले बुबा भु’कम्पपीडितका लागि सरकारले दिएको अनुदानबाट घर बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । बुबा र बहिनी बीच सल्लाह भएछ । सामान पनि किन्ने र उपचार पनि गर्ने । त्यहि तयारीका साथ बुबा र बहिनी गाउँबाट गाडी चढेर, पनौती आउनु भयो ।पनौती ओर्लिएपछि, खाजा खाएर सामान किन्न हिड्दै गर्दा भाञ्जीलाई टिपरले ठ’क्कर दिएछ । भाञ्जीलाई जो’गाउन जाँदा बहिनीलाई पनि टिपरले ठ’क्कर दिएको रहेछ । मलाई कत्ति पनि विश्वास लागेको छैन बहिनी जुनीमाया ।तिमीले यो संसार छा’डेको भन्नेमा ।
तर समाचारहरुमा आइसक्यो । डाक्टरले मृ’त घो’षणा गरिसके । तर पनि मनले अझै विश्वास गरेको छैन् जुनी । मेरो बहिनी । म आउने बाटो कुरिरहेकै हुनेछिन् । मैले काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्दा होस् वा डेढ वर्षअघि अमेरिका आइसकेकापछि । यो अवस्थासम्म आउन तिमीले मेरो लागि असंख्यक गुण लगाएकी छौँ बहिनी जुनी । के अब मैले त्यो तिम्रो गुण तिर्न नपाउने नै हो त । भगवान पनि किन यत्ति बिग्न नि’ष्ठूरी भएका होलान् ।तिम्रो मृ’त्युको खबरले न त हात चल्यो, न त मेरो भोली नै फुट्यो । न सास भेट्न पाए ।न त लास नै भेटाउन सक्छु जुनी तिम्रो ।
को’रोनाको त्रा’सले अहिले कतै नी जान दिएको छैन् । सामुद्र पारीको देशमा छु । आफ्नो भन्ने कोहि हुदैँनन । बेला बेला नेपालबाट तिमीले फोन गरेर सा’न्त्वना दिइरहन्थ्यौ । दिन भरी, रात भरी काम गर्यो । दया गर्ने कोहि हुदैँनन बहिनी ।त्यो बालापनमा हामीले भोगेका दुःखका दिन । अभाव र छटपटि, । भर्खर भर्खर तं’ग्रिदै गर्दा यो कस्तो असुभ खबर सुन्नु पर्यो जुनी । नि’र्दोष भाञ्जी स्मारिका फोनमा थोते बोलिमा, सधै भन्ने गर्थिन । ‘मामा कहिले आउने, चक्केट चाहिन्छ है ।’ म छुट्टी मिलाएर नेपाल आउने अनि बालापनमा भोगेका दुःखहरुसँग एकै पटक सबै घरपरिवार बसेर सम्झने ।
अनि भावी दिनको योजना बनाउने । त्यहि सोचिरहेको थिए जुनी ।तिमी हाम्रो एक मात्रै बहिनी थियौ जुनी । तिम्रो अनुपस्थितिमा म र भाई कतिदिन त’ड्पने त्यसको कुनै सिमा छैन् । मलेसियामा रहनुभएका ज्वाईलाई कसरी सम्झाउँ । घर (च्यासिङखर्क) मा बुढी भइसक्नु भएको आमा तिमी एक्ली छोरी माइत आउने कुरा सुनेपछि कत्ति खुशी हुनुहुन्थ्यो । अब त्यो खुशी कसले दिन्छ जुनी । तिम्रो बे’दनामा आमा अझै अ’चेत हुनुहुन्छ जुनी । अमेरिकाबाट आमालाई सम्झाउने प्रयास धेरै गर्न खोजे तर सकिरहेको छैन । बस तिम्रै बे’दनामा ।
हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा भएको छलफलमा कुनै पनि क्ष’तिपुर्ति नलिने हि’म्मत गरेका छौँ । हामी क्ष’तिपुर्तिमा भन्दा पनि दो’षीलाई क’डाभन्दा क’डा का’नुनी कार’बाही गराउन लागेको छाैँ। बहिनी जुनी र भाञ्जी स्मारिकाको भौतिक शरिर नभएपनि मेरो जस्तै बहिनी र नाबालक भाञ्जीको यसरी द’र्दनाक दु’र्घटनामा कसैले अ’कालमा ज्यान गु’माउन नपर्ने परिस्थितिको निर्माणमा म र ज्वाई लाग्नेछौँ । बहिनी जुनीमाया तिमीलाइ हामी जुनी जुनी सम्भिरहने छाैँ । बहिनी र भाञ्जीको आ’त्मले शा’न्ति पाओस् । श्र’द्धाञ्जी बहिनी जुनीमाया र भाञ्जी स्मारिका ।उनी तिम्रो दाई राज कुमार गोले हालः अमेरिकाको टेक्सस, हुसटन
Previous यी हुन् ! मनकारी घरधनी जसले कोरना भा’इरससंग ल’ड्न क्वारेन्टाइनको लागि आफ्नो घर नि:शुल्क दिदै !
Next अवतरण नगर्न निर्देशन दिँदादिँदै इन्धन भर्नुछ भनेर सिल्क एयरले जबर्जस्ती गर्‍यो – एटीसी
33 mins ago Life Nepali